I-Mountaineer Cabin - I-Airbnb
Indawo yami iseduze nemisebenzi elungele umndeni. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yokunethezeka futhi indawo ifanelekile nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Indawo yami iseduze ne-Ski Sugar (amamayela angu-2), i-Ski Beech (amamayela angu-6), Ugogo Mtn, i-Boone, i-Rocking, i-Tweetsie Railroad, i-Blue Ridge Parkway. Uzoyithanda indawo yami ngoba inezindawo ezizungezile ze-Blue Ridge Mtns. Indlu yethu eyakhiwe ngamapulangwe inikeza konke ukunethezeka kwekhaya lakho okuhlanganiswe nobuhle nokuzola kwe-Blue Ridge Mountains.
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe isanda kwakhiwa futhi yaqedwa ngo-November 2016. Lena yindlu eyakhiwe ngamapulangwe evulekile engu-600 sq. Ihlotshiswe kahle ngemihlobiso esemgangathweni. Kulula ukufinyelela futhi akukude nemisebenzi yendawo nokuthenga. Inesitofu sokungena ngemvume segesi. Igcinwe kahle futhi ithokomele kubantu abangu-3. Kunombhede omkhulu owodwa nesihlalo esiyi-1 se-pulloit twin. I-shower enhle yamathayili enamanzi asemgangathweni ekhanda le-shower. Ikhishi elinakho konke. I-smart TV eyodwa engu-55 "egumbini lokuphumula kanye ne-TV ehlakaniphile engu-32" ekamelweni lokulala. Sinikeza amashidi, amathawula (2), izindwangu zokugeza (2), amathawula ezandla (2), kanye nekhithi yokuqalisa yensipho, insipho yezitsha, insipho yokugeza, imikhiqizo yephepha, izikhwama zemfucumfucu. Kukhona nomgodi womlilo kanye ne-grill yamalahle engakwesokunxele sendlu eyakhiwe ngamapulangwe.* * * * KUSUKELA NGO-APRIL 2021 NGEKE SISAKWAZI UKUBA NOBHAVU WAMANZI ASHISAYO. LOKHU KUBE ISINQUMO ESINZIMA UKWAZI UKUTHI IZIVAKASHI ZIYAZIJABULELA NGEMPELA KODWA AKUZONA ZONKE IZIVAKASHI EZILANDELA IMITHETHO YE-SPA FUTHI IZINDLEKO ZOKUGCINA ZIPHEZULU KAKHULU UKUGCINA AMANANI ETHU EPHANSI* * *
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ihlezi kuma-acres angu-8 endlu yangasese ngaphandle komgwaqo ohamba emaphandleni. Kukhona ezinye izindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezinekamelo lokulala elilodwa (indlu eyakhiwe ngamapulangwe i-Little Bear, indlu eyakhiwe ngamapulangwe ye-Land Bumpkin ne-Little Elk) esakhiweni esifanayo futhi zingaphansi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo. Singu- Tree Log Cabin Rentals e-Banner Elk NC. Bheka igama lethu kuwebhu bese uhlola zonke izindlu ezakhiwe ngamapulangwe esinazo.
Sihlala eduzane futhi sifuna zonke izivakashi zethu zazi ukuthi sinakekela amakhabethe ethu futhi siyatholakala ukuze sisize kunoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame.Sicela usazise uma kuphakama izinkinga noma uthola ikhabethe lethu lingagculisi. Sifuna ukunakekela izinto ngokushesha ukuze senze ukuhlala kwakho kube kuhle.
Sihlala eduzane futhi sifuna zonke izivakashi zethu zazi ukuthi sinakekela amakhabethe ethu futhi siyatholakala ukuze sisize kunoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame.Sicela usaz…